प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाउदैं उपेन्द्र यादवको ठोकुवाः नेपाली भूमि फिर्ता हुदैंन; हेर्नुहोस अन्तरबार्ता–(भिडियोसहित) – Namaste Dainik
प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाउदैं उपेन्द्र यादवको ठोकुवाः नेपाली भूमि फिर्ता हुदैंन; हेर्नुहोस अन्तरबार्ता–(भिडियोसहित)
May 29, 2020 NamastedainikLeaveaComment on प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाउदैं उपेन्द्र यादवको ठोकुवाः नेपाली भूमि फिर्ता हुदैंन; हेर्नुहोस अन्तरबार्ता–(भिडियोसहित)
नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । एक चर्चित टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा नेता यादवले आन्तरिक एकता बलियो नबनाईकन भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा असम्भव रहेको र त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।
उनले भने,’प्रधानमन्त्रीले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? त्यस विषयमा हाम्रो छलफल चलिराखेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो हामीलाई पनि साथमा लिएर जाने । यदि उहाँले लिएर जान सक्नुभएन भने त्यो उहाँको दोष हुन्छ । उहाँले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास, अविश्वासको कुराभन्दा पनि नियतको कुरा हो । उहाँले मुलुकलाई कता लैजानुहुन्छ । यो पहिलो कुरा हो,अर्को कुरा देशको आन्तरिक एकता नभईकन,आन्तरिक एकता दहो नभईकन उहाँले भन्नुहुन्छ नि भूमि ल्याउने,भूमि ल्याउने होईन उहाँले । आउनेवालापनि उहाँबाट होईन । एउटा कुरा याद राख्नुहोस्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई साथमा नलिएर एक्लै अगाडी बढ्न खोजेको उनको आरोप छ । आफूहरुले उठान गर्दै आएको संविधान संशोधनको मुद्धाको सुनुवाई हुन्छ कि हुदैँन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको यादवको भनाई छ । ओलीमाथि अर्को आरोप लगाउदैं उनी भन्छन्,प्रधानमन्त्री ओली एक्लै अगाडी बढेर सबैकु्रा गर्छु भन्ने जुन दम्भ छनि प्रधानमन्त्रीज्यूमा त्यसले कही पनि पुर्याउदैँन,त्यसले केवल दुर्घटना निम्त्याउछ ।
नेपाल भारत सिमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने यादवले बताए। वार्ताबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको भनाई छ । नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पिर्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वप्रथम आन्तरिक एकता मजबुत पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
हेर्नुहोस् भिडिओ अन्तरवार्ताः:
रिर्सोटमा फ्रेस हुन भन्दै प्रहरीसंग रुम बुक गरेर बसेकी २१ वर्षीया निर्मला मृत अवस्थामा फेला
नेपालमानै कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल लैजान खोज्दा स्थानीयको अवरोध, प्रहरीद्वारा हवाई फायर।
कोरोना लगेका भारतियहरु कसरी नेपाल छिरे ? (भिडियो हेर्नुस)
April 27, 2020 April 27, 2020 Namastedainik